Alahady 17 janoary 2021 - FJKM Amparibe Famonjena
Fanompoam-pivavahana itondrana am-bavaka ny Filohan’ny FJKM ANDRIAMAHAZOSOA Irako Ammi, Mpitandrina sy ny ankohonany ary ny taom-piasana 2021.​
Fanompoam-pivavahana notontosaina teny amin’ny Coliseum Antsonjombe fidirana faharoa (11ora) Alahady fahatelo ibanjinana ny lohahevitra ”Maneho ny maha Andriamanitra Azy ny Tompo” ANDRIAMAMPIANINA Zaka, Mpitandrina, Mpanolotsaina Birao Mpiandraikitra Foibe (BMF) no nitarika ny fotoana ; ZARAZAKA Jean Louis, Mpitandrina, Filoha mpanampy BMF, no nitory ny Tenin’Andriamanitra.
Nanao ny anjara hiran’ny antoko mpihira ary natao ny fiarahabana Apôstolika sy ny Fiderana, natao ny hira Salamo 145.
ndriamanitra ô, midera sy misaotra ary mankalaza Anao izahay. Fifaliana ho anay ny fahatanterahan’izao fotoana izao. Manatre anay ry Tompo. Avaozy izahay amin’ny fanatonana Anao. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy. Amena.
Fanambarana ny sitrapon’Andriamanitra: Eksodosy 20 : 2-17
Hira FFPM 241: 2,3
Natao ny hira Ffpm: 473 : 1, 2 sy ny famelan-keloka: Romana 8 : 33 ; Salamo 32 : 1-2 Natao ny hira Ffpm : 509 : 1, 2 rehefa vita izany ka notoizana tamin’ny fanekem-pinoana Apôstolika.
-Nolazaina ireo fihaonam-be amin’ity taona ity
-Nambara fa hotanterahina any Sambava ny 11 aogositra ka hatramin’ny 18 aogositra ny Synôda lehibe.
-Nisaorana ny Fitondram-panjakana sy ny Kaominina Antananarivo Renivohitra noho ny fanomezan-dalana sy ny fiaraha-miasa amin’ny fanatanterahana ny fanompoam-pivavahana.
-Nisaorana ireo nifanome tanana tamin’ny fanatontosana ny fanompoam-pivavahana.
-Nisaorana ihany koa ireo rehetra izay nanotrona ny fotoana ; ny solontena avy amin’ny Fitondram-panjakana, ny solontena avy amin’ny FFKM ary ny mpino rehetra izay tonga maro.
-Nisaorana ihany koa ireo haino aman-jery sy mpikirakira tambazotran-tserasera sy tranokala ary fifandraisan-davitra izay mampita ny fanompoam-pivavahana.
-Notononina ireo Fitandremana nahatontosa ny adidiny.
Hiran’ny Antoko mpihira: Aminao ny hery ; Ekeko Ray izay atolotrao ho ahy.
Fankalazana ny Tenin’Andriamanitra & Fotoana ho an’ny ankizy
Hira FFPM 788: 1, 2
Vavaka: Tompo ô, mampianatra anay ny sitraponao Ianao. Mitenena Tompo ô fa mihaino izahay. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy. Amena.
Hafatra : ny Lioka 8 : 17 no nangalana izany : “Fa tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy ho fantatra sy tsy haseho.”
Tantara fohy: Nisy mpifankatia nividy pizza, rehefa natolotra azy ireo ilay pizza dia vola azon’ilay mpivarotra nandritra ny tontolo andro no tao anaty baoritra fa tsy pizza. Niverina izy roa ka nomeny ilay mpivarotra ilay baoritra sy volabe tao anatiny. Faly ilay mpivarotra, ary ho fankasitrahany ny fihetsik’izy roa dia notolorany pizza iray fanampiny izy ireo.
Nangataka azy roa mba hijoro vavolombelona eny amin’ny haino aman-jery ilay mpivarotra. Tsy nanaiky izy roa. Teo vao fantatra fa hay izy ireto samy efa vadin’olona ary izany no antony tsy nanekeny hangalana mpanao gazety.
Aoka isika hanao ny marina hatrany satria hitan’Andriamanitra avokoa izay ataontsika.
Vavaka: Misaotra Tompo ô fa mbola mampianatra anay Ianao. Indreto izahay vonona hijoro tsara na aiza na aiza toerana misy anay. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy. Amena.
Hira: FFPM 207: 1,2
Vavaka mialoha ny vakiteny
Andriamanitra ô, nohamarininao taminay ny famindramponao. Nandalo fisedrana izahay tamin’iny taona iny. Misaotra Anao izahay fa mbola nataonao nahatratra izao taona vaovao izao. Maniry ny hanompo sy hankalaza ary hanome voninahitra Anao mandrakizay izahay. Ataovy mahakasika ny fonay Tompo ny Teninao ijoroanay vavolombelona. Ny Teninao Tompo no mamelona anay. Midina Fanahy Masina ô fa sarobidy aminay ny Tenin’Andriamanitra. Mitenena Tompo ô fa vonon-kihaino izahay. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy. Amena. Hira: FFPM 164: 1, 3
Ny Ezekiela 36,33-38 no nangalana ny toriteny. Ezekiela dia Mpaminany niteny tamin’ny vanim-potoan’ny fahababoana sy taorian’ny fahababoana. Fampanantenana ny mba hanana ho avy tsara ny votoatin’ny faminaniany. Misy antony maro no nahatonga izany fambaboana izany. Niavaka tamin’izany i Manase. Nitarika ny fireneny tany amin’ny ratsy Manase. Ity mpanjaka ity dia nampirona ny vahoakany tany amin’ny fanompoan-tsampy. Navadiny ho tempolin-tsampy mihitsy ny tranon’Andriamanitra. Nataony sorona hatramin’ny zanany. Novonoiny sy naripany ireo mpaminany sy olon’Andriamanitra. Natanjaka ny fanjakan’i Manase kanefa dia nisongadina ny tsy fitoviana ary nanjakan’ny tsy rariny ny mahantra. Nanoloana izany dia mampanantena hoavy tsara i Ezekiela. Fo vaovao sy fanahy vaovao no atolotr’Andriamanitra ho an’ny olony. Izany fo sy fanahy vaovao izany no miteraka fitahiana sy hoavy mamiratra. Andriamanitra ihany koa dia mampanantena fitahiana ho an’ny tany mba hamokatra. Raha ho an’i Madagasikara dia ny fambolena sy fiompiana no antoky ny fampandrosoana. 82% amin’ny Malagasy dia tantsaha avokoa. Ny sehatr’asa mifototra amin’ny tany toy ny fambolena sy fiompiana ary ny harena an-kibon’ny tany izany no mahakasika ny maro an’isa. Izany ihany koa no fototry ny toe-karena mampihodina ny indostria sy ny “secteur tertiaire”. Kanana dia tany maina sy tsy ampy rano kanefa nataon’Andriamanitra tondra-dronono sy tantely. Ny faritra atsimon’i Madagasikara ihany koa dia tany maina sy saro-drano. Tsy ny ara-panahy ihany no mampahory ny olona fa mila hatsaraina ihany koa ny ara-tsosialy. Tsy mitaona ny olona hiala any Atsimo no vahaolana fa ny fiasana ny tany. Tsy lavitra ny vahaolana. Ny fankatoavana an’Andriamanitra amin’ny fo sy fanahy vaovao no miteraka fitahiana. Mahereza fa azo resena ny fahantrana hampiakatra ny voninahitr’Andriamanitra.
Vavaka setrin’ny toriteny
Misaotra Tompo noho ny Teninao izay mitarika anay amin’ny lalana tsara sy mampanantena hoavy tsara ho anay. Isaoranay Ianao fa manolotra programam-pandrosoana ho an’ny maro an’isa. Mifona Tompo fa tsy nahatanteraka ny sitraponao izahay. Ny fanaon’izao tontolo izao no nataonay. Mamelà ny helokay Tompo ô ary isaoranay ny famindramponao ka nahazoanay izao taona vaovao izao. Arovy amin’ny loza izahay. Tahio ity taona ity Tompo. Tahio ny vahoakanao sy ny fiainan’ny FJKM, ny Filohan’ny FJKM sy ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny. Tahio ny Synoda lehibe izay hotontosaina ny 11 ka hatramin’ny 18 aogositra izao any Sambava. Tahio ity firenena ity sy ny Mpitondra azy. Tanteraho ry Tompo izay tsy voatonon’ny vavanay kanefa mahasoa anay. Izany vavakay izany dia ampiarahanay amin’ny vavaka nampianarinao. Amena.
Fandraisam-pitenenan’ny Filoha mpanampy, RANDRIAMAMONJISOA Georges, Mpitandrina Nifantoka tamin’ny firariantsoa ho an’ny filohan’ny FJKM sy ny ankohonany ny lahateniny. Ny Lioka 4: 18 no nentina nirary soa ny Filohan’ny FJKM : “Ny fanahin’ i Jehovah no ato anatiko, satria nanosotra Ahy hitoryTeny soa mahafaly amin’ny malahelo Izy; Naniraka ahy fandefasana amin’ny mpifatotra Izy; Hanafaka izay nampahoriana. Nirary soa ny Filohan’ny FJKM ny mpitondra teny mba ho mpandresy manoloana ny ady amin’i satana. “Fa raha izaho sy ny ankohonako kosa, dia hanompo an’i Jehovah izahay.” Josoa 24 : 15b. Izany no fampanantenan’ny mpianakavin’ny finoana mba hahafaly ity Raimandreny ara-panahy ity.
Tompo ô, hoy Ianao, manajà ny rainao sy ny reninao. Misaotra Anao izahay ry Tompo fa nomenao ity Raiamandreny ara-panahy ity. Ianao nifidy azy hitarika anay ho any Aminao. Ataovy tanteraka aminy Tompo ny teny firariantsoa nataonay taminy teo. Arovy amin’ny asan’i satana izy ary tolory andro maro. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy. Amena. Hira: Mijoroa Taorian’izay dia nisy lahateny nataon’i Sarah solontenan’ny zanaky ny Fiangonana sy fandraisam-pitenenan’ny Filohan’ny FJKM.
Tompo ô, mitodika Aminao izahay. Tahio ity taom-piasana ity. Misaotra Anao izahay ry Tompo fa afaka mametraka izany taom-piasana izany eo anatrehanao. Nisaorana ny solontenan’ny Fitondram-panjakana sy ny FFKM ary ny mpino izay tonga nanotrona. Nisaorana tahaka izany ny mpikarakara rehetra sy izay nifarimbona tamin’ny fanatontosana ny fotoana. Ny Isaia 45 : 2 no natolotry ny Filohan’ny FJKM ho an’ny mpino. “Handroso eo alohanao Aho” Tsy ho diso lalana isika amin’ity 2021 ity, hoy izy, fa ny Tompo no mialoha antsika.
« Miorena tsara. Mahereza tsara. Miasà tsara. » Araka izany dia mila mibebaka isika, manaiky an’i Jesoa ho Tompo sy mpamonjy antsika ary mitaona ny olona ho any amin’ny Fanjakan’Andriamanitra. Mila mifankahery isika. Mila averina ny fahazotoana mamonjy ny fiarahana mivavaka indrindra any am-piangonana. Mila manefa ny adidintsika isika. Maro ny asa mbola tokony hotanterahina, anisan’izany ny fanohizana ny tsangambato faha 200 taonan’ny sekoly FJKM. Tsy inona izany fa ny fananganana ny toeram-panofanana mpampianatra any Imerimandroso Ambatondrazaka ; ny famitana ny toeram-panomanana Mpitandrina any Ivato izay tsangambato faha 50 taonan’ny nananganana azy. Izay vonona hanome tanana amin’izany dia afaka miantso ny laharana an-tariby : 033 11 210 53 ; ary ny adidintsika manoloana ny kere any atsimo ihany koa dia tokony efaina. Raha vonona ny hanome tanana momba izany dia ny Mpitandrina Soja Arthur no hatonina amin’ny laharana 0347477804.
amindrà fo aminay ry Tompo, mangataka Aminao izahay mba hanafoananao ny loza misy eto aminay toy ny valanaretina sy ny mosary. Androtsahy ranonorana sahaza azy ry Tompo ity firenena ity. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy. Amen
Natao ny hira: Mijoroa ; FF 9 ary natolotra ny Tsodrano.
reo tompon’anjara :
Nitarika ny fotoana: ZARAZAKA Jean Louis, Mpitandrina (Filoha mpanampy Mpitandrina Birao Mpiandraikitra Foibe na BMF)
Nitory ny Teny: ANDRIAMAMPIANINA Zaka, Mpitandrina (Mpanolotsaina BMF))
Nilaza ny raharaha: RADIMISON Jonah, Mpitandrina, Sekretera Jeneraly
Namaky ny Teny:
-Testamenta taloha: RAKOTONINDRAINY Jaona, Mpitandrina (TDF)
-Filazantsara: RAKOTONDRANAIVO Domoina (TDS)
– Apokalypsy: VELOSOA Andry Nirina (TDMV)
Nanao tatitra an-tsoratra : ZANAHARITSIMBA Toky
Raki-tsary : Facebook